1.6 Billion Muslimiin Ah Oo Maanta Dunida Uu Soon U Bilowday
Monday May 06, 2019 - 13:37:48 in Wararka by saleban Cilmi
In ka badan hal biyan iyo lix boqol oo milyan oo Muslimiin ah ayay u bilaabatay bisha Barkaeysan ee Ramadan.
Ramadan oo ah bisha sagaalaad ee taariikhda hijriyada ee Islamka ayaa ka mid ah shan tiir ee ay ku qotonto diinta Islamka.
Waa bishii uu Quraanka Kariimka ah uu ku soo deggay Nabi Muxamed Nabad Gelyo iyo Naxariis korkiisa ha ahaatee, qarnigii todobaad, waxaan muslimiintu ay ku oogaan soonka bishan, iyagoo ka taga cunista, cabitaanka iyo galmada, laga bilaabo marku waaga dilaaco ilaa ay qoraxdu ka dhacdo.
Dalkan Mareykanka, muslimiin lagu qiyaasay 3 milyan iyo laba boqol oo qof ayaa bishan soomaya, inkastoo ay tira aad u yar yihiin marka loo eego tirada guud ee shacabka Mareykanka oo ah 327 milyan oo qof.
Qaar badan oo ka mid ah madaxda dunida ee reer galbeedka ayaa ku soo dhaweeyay bishan, hambalyo ay u direen Muslimiinta iyo iyagoo cambaareeyay falalka Islam naceybka ee waayadanba ku soo kordhayay dalalka reer galbeedka.